Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1088
Bad sy Madagasikara : 3,5 miliara Ar hanampiana ny tanora amin’ny fambolena
Par Taratra sur 30/05/2016 Economie, NS Malagasy
Ny herinandro lasa teo, 23 hatramin’ny 27 mey, nanatrika ny fivoriambe isan-taona fanaon’ny Banky afrikanina momba ny fampandrosoana (Bad) tany Lusaka, Zambia, ny delegasiona malagasy notarihin’ny minisitry ny Fitantanam-bola sy ny tetibola, Rakotoarimanana Gervais. Ivelan’izay fivoriambe izay, nisy fifanarahana manokana teo amin’ny Bad sy Madagasikara, nahazoantsika 1,1 tapitrisa dolara na 3,5 miliara Ar hatao indrindra […]
Magro Ankorondrano : manamafy ny CCIA fa azy tanteraka ny tany
Par Taratra sur 30/05/2016 Divers, NS Malagasy
Anisan’ny andraikitra lehibe sahanin’ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria (CCIA) eto Antananarivo ny miaro ny fananany. Mbola nohamafisin’ny Anteniemieran’ny CCIA izany tamin’ny filazana nalefany amin’ny fiarovana ny taniny ao anatin’ny ara-dalàna sy mangarahara. Koa notsiahivin’ny CCIA hatrany fa azy ny tany misy ny Tranombarotra Magro Ankorondrano ampiasain’ny Tiko. Tsy misy mampiahiahy ny amin’izany, porofon’izany ny […]
Rugby : “Aleo hajaina ny lalàna”, hoy ireo filohan’ny seksiona
Par Taratra sur 30/05/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Nanao fanambarana iombonana ireo filohan’ny seksiona efatra, tamin’ny alalan’ireo filohany : Radimilahy René Richard, avy any Avaradrano. Randriarimanana Armand, avy any Atsimondrano. Rakotomalala Richard, avy any Ambohidratrimo. Andrianaivomalala Ako, avy amin’Antananarivo Renivohitra. Niray feo izy ireo fa tokony hohajain’ny fileovana rehetra ny fepetra sy ny didy navoakan’ny Malagasy Rugby ny amin’ny tokony hisian’ireo an-tanan-tohatra rehetra […]
Rugby – “CCOI 2016” : tompondakan’ny ranomasimbe Indianina ny FTM Manjakaray
Tsy nivoaka an’i Madagasikara ny “Amboaran’ny ranomasimbe Indianina”, amin’ny taranja rugby. Lasan’ny FTM Manjakaray mantsy izany, rehefa nandresy ny tompondakan’i La Réunion izy ireo. Voahosotra ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina (CCOI), taranja rugby, ny FTM Manjakaray. Resiny tamin’ny isa mazava, 26 noho 15, ny RC ST Paul, tompondakan’i La Réunion. Fihaonana izay notanterahina tetsy amin’ny […]
Barea de Madagascar : tsy ho avy i Voavy Paulin fa maratra
Amin’ny alahady ho avy izao no hiatrika ny lalao miverina amin’ny RD Kongo ny Barea de Madagascar, eo amin’ny fifanintsanana hiadian-toerana amin’ny “Can 2017”. Lalao hatao any amin’ny kianja Rabemananjara, Mahajanga. Araka ny fantatra, tsy ho anisan’ireo mpilalao mpila ravinahitra ho avy i Voavy Paulin. Naratra ny tovolahy, nandritra ny fihaonana nataony niaraka tamin’ny ekipany, […]
Kitra – «Ligue des champions 2016» : tompondakan’i Eoropa fanin-11 ny Real de Madrid
Niverina teo am-pelatanan’ny Real de Madrid, avy any Espaina indray ny anarana maha tompondakan’i Eoropa, eo amin’ny taranja baolina kitra. Resiny teo amin’ny famaranana, ny Atletico de Madrid, izay tsy mbola afa-bela indray. Voahosotra ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions 2016” indray ny Real de Madrid. Norombahin-dry zalahy fanin-11 indray mantsy izany anaram-boninahitra izany […]
Beach volley – Zone 7 2016 : misedra olana ny ekipa nasionaly
Tsy mazava. Raha nanomboka ny fampivondronana ny ekipa nasionaly hiatrika ny “Championnat des Nations de la Zone 7” eo amin’ny beach volley, sokajy lahy sy vavy, andiany voalohany, ny federasiona malagasin’ny volley (FMVB), ny faran’ny herinandro teo, misedra olana sahady ireo mpilalao mandrafitra ny ekipam-pirenena, amin’izao fotoana izao. Araka ny efa fantatra mantsy, voafidy hampiantrano […]
Afrobasket Men U16 2017 : nitsidika an’i Maorisy ny Fiba Afrique
Tapaky ny fivoriamben’ny federasion’ny basikety aty Afrika na Fiba Afrique fa hampiantranoan’i Maorisy ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika, taranja basikety, sokajy U16 zazalahy, na “Afrobasket Men U16”, ny taona 2017. Araka izany, nanatanteraka fitsidihana tatsy Maorisy ny solontenan’ny Fiba Afrique, Ramaroson Jean-Michel, filohan’ny kaomision’ny federasiona nasionaly aty Afrika, ny 23 – 26 mey teo. Anisan’ny […]
Andrianainarivelo Hajo : « Tsy azo ekena ny fanjakana mpanao ramatahora… »
Par Taratra sur 30/05/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Tsy nitsitsy fitenenana. Namatrapatratra ny filoha nasionalin’ny antoko Malagasy miara-miainga manoloana izao toe-draharaha eto amin’ny firenena izao. Mbola nohamafisiny ny fitakiana efa nambaran’izy ireo. « Tsy azo ekena ny fanjakana mpanao ramatahora. Tokony hiala amin’ny toerany izany ary hatao ato anatin’ny fotoana fohy ny fifidianana mialoha ny fotoana, hilazan’ny vahoaka raha mbola tiany na tsia […]
Rakotoarison Jean-Eric : “Tsy tokony hisy tahotra… “
“Tsy tokony hisy henamaso ary tsy tokony hisy tahotra ny fanenjehana izay olona hita mazava hoe manao kolikoly. Izay, angamba, no andrasan’ny olona rehetra. Na ny vahoaka malagasy izany, na ny vahiny mpiara-miasa amintsika.“ Io ny nambaran’ny filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ( HCC), Rakotoarisoa Jean-Eric, tamin’ny mpanao gazety teny Anosy, taorian’ny tatitry ny […]
Lozam-pifamoivoizana : hampiasa fitaovana ho fitsirihana ny hafainganam-pandeha ny zandary
Par Taratra sur 30/05/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nanao andrana ara-teknika ireo fitaovana vaovao entina misoroka ny lozam-pifamoivoizana teny amin’ny lalana By-Pass ny zandary, ny zoma teo. Fitaovana ahitana radar de détecteur de vitesse sy alcotorche. Fiara-miasan’ny zandary sy ny orinasa tsy miankina iray no nahazoana ireto fitaovana ireto, araka ny fanazavana voaray. Haparitaka manerana ny Nosy izy ireto mba hampiasain’ireo zandary misahana […]
Lozam-pifampoivoizana – Antanifotsy : mpandeha iray maty tsy tra-drano, 9 hafa naratra mafy
Namono olona indray ny Rn 7. Nitrangana lozam-piarakodia mahatsiravina, omaly tamin’ny 6 ora maraina tao amin’ny fokontany Masoandro, kaominina ambanivohitra Ampitatafika, distrikan’Antanifotsy Pk 94. Taksiborosy mini-bus Toyota iray avy any Fianarantsoa no nifandona tamina kamiaobe tao anaty fiolahana mampidi-doza. Araka ny fanazavan’ny zandary nanao ny fanadihadiana, miisa 15 ireo mpandeha nentin’ilay taksiborosy. Maty tsy tra-drano […]
Ambohitsoa : tratra ireo jiolahy mpanolana tovovavy
Saron’ny mpitandro filaminana ny jiolahy roa tompon’antoka tamin’ny fanolanana miharo vonoan’olona teny Morarano Ambohitsoa, ny herinandro teo. Araka ny loharanom-baovao voaray, tovovavy iray no niharan’ny fanolanana sady novonoina teny Ambohitsoa, ny herinandro lasa teo. Voalaza fa nozerana vatobe ny lohany rehefa avy nanalan’ireo jiolahy ny filan-dratsiny. Lasa nitsoaka avy hatrany ireo nahavanon-doza rehefa avy namono […]
Fikaonandoha teny Ivato : milaza hanatsara ny asany ny polisim-pirenena
Nifarana ny zoma teo teny amin’ny Sekolim-pirenena ambony ho an’ny polisy eny Ivato ny fikaonan-dohan’ny polisim-pirenena. Isan’ireo nisongadina tamin’izany ny fanatsarana ny fomba fiasan’ny polisim-pirenena… Fehin-kevitra maromaro no tinapaka nandritra ity fikaonandohan’ny polisim-pirenena ity. Isan’izany ny fanatsarana ny fomba fiasan’ny polisim-pirenena sy ny fifampitondrana eo anivon’ny polisim-pirenena. Nivoaka tamin’izany koa ny fijerena manokana ny […]
Par Taratra sur 30/05/2016 En Bref, NS Malagasy
Betsaka ireo renim-pianakaviana nitaraina ho niharan’ny fanendahan’ireo tontakely teny Analakely, ny faran’ny herinandro teo. Nifanitsakitro rahateo ireo mpiantsena ho fankalazana ny « Fetin’ny reny » ka nanjaka toy izany koa ireo mpanao sinto-mahery. Lasa mitsoaka eny anaty pavillon avy hatrany ireo jiolahy rehefa avy manendaka ary misolo akanjo. Fiara Renault express no nifandona tamin’ny Sprinter iray teny […]
Par Taratra sur 30/05/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Izay tia vola, hono, jamba sy malemy avy hatrany, raha vao maso mahita vola na tampin’ny vola ny masony. Miseho ny halemeny. Raha vao abontsina na dokafana ny adalam-boninahitra, mohaka sy modaka. Miharihary ny fahalemeny. Eny, raha vao voatohintohina aza ny haja amam-boninahitra, misondrovaka. Mbola halemena koa izay… Tsy mifankaiza amin’izany ny eo amin’ny politika: […]
Mitohy any amin’ny faritra ny fampihorohoroana : arahi-maso akaiky indray koa i Beriziky sy ny kolonely iray
Par Taratra sur 30/05/2016 La Une, NS Malagasy, NS-Politique
Vao mainka mampisavorovoro ny ataon’ity fanjakana ity. Mitohy any amin’ny faritra, any Toamasina indray izao ny fampihorohoroana, raha mbola tsy fantatra akory izay vokatr’ireny fisavana trano teto an-drenivohitra ireny. Arahi-maso akaiky koa mantsy izao ny praiminisitra teo aloha Jean Omer Beriziky sy ny kolonely misotro ronono iray. Arahi-maso tanteraka indray koa izany izao ny […]
Mandats d’arrêt, perquisitions… : terreur ou quête de la justice ?
Par Taratra sur 28/05/2016 NS Français, Opinion
En une semaine, trois perquisitions de domiciles et même de sociétés ont été effectuées par les forces de l’ordre. A cela s’ajoute la série de rumeurs sur des mandats d’arrêt. A croire que l’Etat semble tout faire pour qu’un climat de terreur règne dans le pays et certains médias se prêtent au jeu à travers […]
Rugby – «Amboaran’ny ranomasimbe Indianina 2016» : vonona ny FTM hanohitra ny St Pauloise La Réunion
Par Taratra sur 28/05/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Hifantoka etsy amin’ny kianja Makis Andohatapenaka avokoa ny sain’ny mpitia rugby rehetra, amin’ity faran’ny herinandro ity. Ho fantatra eo mantsy izay hahazo ny “Amboaran’ny ranomasimbe Indianina”. Hatao, rahampitso alahady, eny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka, ny fiadiana ny “Amboaran’ny ranomasimbe Indianina”, eo amin’ny taranja rugby. Hifampitana amin’izany ny FTM Manjakaray, tompondakan’i Madagasikara, sy ny RC […]
Kitra – «Ligue des champions d’Europe 2016» : samy matahotra na ny Real na ny Atletico de Madrid
Ho fantatra, anio, ao amin’ny kianja San Siro de Milan ao Italia, izay hibata ny amboara eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa na ny “Ligue des champions”, taranja baolina kitra. Adin’ny samy madrilène (samy avy ao Madrid izany) ny famaranana : ny Atletico sy ny Real. Ekipa diso mifankahalala tsara ny roa tonta. Izy […]
Volan’ny kanto an-dalambe : hifarana ny “Hetsik’Iray à l’U”
Par Taratra sur 28/05/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Nasongadina, nandritra ity volana mey ity, ireo endrika rehetra anehoana ny kanto an-dalambe, ho an’ny ADCM Craam eny amin’ny oniversiten’Antananarivo. Anisan’ireo zavakanto mahasarika ny tanora ankehitriny izy ity, hany ka tsy vitsy ireo nanaraka sy nandray anjara tamin’ireo hetsika samihafa notanterahina tamin’izany. Ambohipihaonan’ny tanora, rahateo, ny eny Ankatso. Tsy ho latsa-danja amin’izay rehetra efa notanterahina […]
Fakafaka : ny « Reny » teo amin’ny Malagasy
Par Taratra sur 28/05/2016 Divers, NS Malagasy
« Fetin’ny Reny », rahampitso. Na tsy mahatazona ampahany na manontolo izay maha reny azy izay intsony aza ny vehivavy malagasy sasany, tsy afa-bela satria, niteraka, nitaiza, nanabe… Na tsy mahay mibaby intsony aza ! Misy dikany lehibe eo amin’ny fifamatoran’ny zaza amin-dreniny io. Tsy nisaraka tamin-janany fa nanakaiky azy hatrany ny reny malagasy. Tsy afaka ny manao […]
Basikety – N1B vehivavy sy U20 lehilahy : nomontsanin’ny SBBC ny ASF Analamanga
Nanampatra ny heriny ny SBBC Boeny, teo amin’ny lalao ampahefa-dalana amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja basikety sokajy N1B vehivavy. Fihaonana notanterahina tany Toliara, omaly. Nomontsanin’ny tovovavin’i Boeny, tamin’ny isa mavesatra 119 noho 38, ny ASF Analamanga. Tsy niady mihitsy ny fihaonana satria nanjaka tamin’ny lafiny rehetra ry zareo SBBC, na teo amin’ny tanjaka […]
Par Taratra sur 28/05/2016 Economie, NS Malagasy
Nifandimby ny orana malefaka sy ny hafanana, nandritra ny 10 andro faharoan’ity volana mey ity (11-20 mey). Lasa sakafo tsara ho an’ny andiam-balala, noho izany, ny hamaitson’ny zavamaniry, sady nampitombo azy ireo, indrindra ny taranaka fahatelon’ny valala. Araka ny tatitry ny Fikambanana iraisam-pirenena misahana ny sakafo (FAO), tsikaritra ireo tany amin’ny faritra Menabe, Atsimo Andrefana, […]
Vaha kanto : hisy tsiahy an-dRamika
Toy ny fanaony isan-taona, hanatanteraka ny hetsika « Vaha kanto » ny fikambanana Dian-tanamasoandro ny 3 jona ka hatramin’ny 22 jona izao ao amin’ny Cemdlac Analakely. Andiany fahenina izay hisy ampaham-potoana sy toerana ho fahatsiarovana an-dRatovoherinirina Michel na Ramika, iray amin’ireo nanangana ity fikambanana ity, 6 taona lasa izay. Hisy ny fijoroana vavolombelona tamin’ny fiarahana tamin-dRamika tany […]
« Précédent 1 … 1 086 1 087 1 088 1 089 1 090 … 1 214 Suivant »